PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-12-02 - Kunxuswa abaxhasi kwelabesifazane
Kunxuswa abaxhasi kwelabesifazane
Isolezwe ngeSonto - 2018-12-02 - EZEMIDLALO - NHLANHLA SITHOLE
U-ANASTASIA Tsichlas, ongomunye owayeyibambe eqhulwini ekutheni iSAFA igcine ivumile ukusungula ibhola lamantombazane, eNingizimu Afrika, ngenxa yezinguquko ezase zibonakala kwamanye amazwe, uhlokoloza izinkampani okuyizona eziphethe umnotho kuleli lizwe ekutheni ziqale ukubuka ibhola labantu labesifazane ngamanye amehlo.
Le nkulumo kaTshiclas uyisho ngesikhathi ekhuluma neSolezwe ngeSonto ese-Accra, eGhana, lapho ebebungaza khona ukunqoba kwezintombi zaseNingizimu Afrika ngokungena okokuqala emidlalweni yeFIFA World Cup, eFrance, ngonyaka ozayo.
“Angikhathali noma umuntu angathini sesifikile isikhathi sokuthi izinkampani zitshale imali ekuthuthukiseni ibhola labesifazane, ziyeke ukulibukela phansi,” kuchaza uTshiclas.
“Amantombazane azodlala kwiWorld Cup ngemuva kweminyaka eminingi kusetshenzwa kanzima kodwa namhlanje sivuna izithelo zesikhathi esisinzima esidlule kusona kuthiwa ibhola lamantomabazane yinto engekho,” kusho uTshiclas.
Uphinde wathinta iphuzu lokuthi ukusungulwa kweligi yebhola lamantombazane ezodlala ngohlelo lukazwelonke kuzolisiza kakhulu ekutheni lidlondlobale ngaphezu kwalokhu eliyikhona.
“Nakhona lapho izinkampani eziyizikhondlakhondla kwezomnotho kufanele zifake kakhulu igxalaba ekutheni lifinyelele ezingeni isizwe elilifuna likulona,” kubeka uTshiclas.
Owayeqeqesha iBanyana kwi-African Women Cup of Nations eyayiseNigeria ngo
1998, uNomalungelo Mooi, uthi ubevele enalo ithemba lokuthi uma amantombazane angase enze kahle kungaba ukuguquka kwenzinto ebholeni lawo.
“Bengivele nginalo ithemba lokuthi sizokwenza kahle kulokhu. Obekungiqinisa idolo wukuthi umqeqeshi ngumuntu wesifazane, ongumnsinsi kwelengabade nodlalile kwiBanyana Banyana,” kusho uMooi. Uthi uyahambisana nombono wokuthi akungalandwa abaqeqeshi abaqhamuka emazweni aphesheya.
“Abaqeqeshi bakwamanye amazwe empeleni abasenzeli lutho. Bafike bahole ezinkulu izimali ekugcineni bangashiyi lutho.
“Ngamangala ngesikhathi kugudluzwa uSkheshe
(Joseph Mkhonza) ekubeni iqembu lalidlala kahle. Uma babefuna ukulandela indlela osekwenziwayo ngayo izinto emhlabeni ukuthi sekungabantu besifazane abaqeqesha amaqembu abesifazane kwakufanele bamtholele umuntu owayezoqale asebenze naye,”kusho uMooi.
Uphethe ngokuthi izinkampani sekufanele zikhohlwe ukubheka kwiBafana Bafana kuphela kodwa nasebholeni labesifazane sekufanele zisondele.
“Angisho ukuthi amantombazane awahole ngokulingana neBafana Bafana kodwa kufanele igebe lingabi likhulu kakhulu emaholweni,” kuphetha uMooi.
Ukuvuleka kwegebe emaholweni abadlali beBanyana nawo zakwabo kwiBafana kuvunywa ngisho uMengameli weSafa uDanny Jordaan obexoxa nelinye lamaphephandaba.
“Siyavuma ukuthi abadlali beBanyana kufanele beholelwe kangcono.
“Kodwa simpintshekile ngoba uxhaso lwemali esilutholayo kuncane kakhulu kunaleyo esiyithola ngeBafana Bafana. Singajabula uma izinkampani zingase zifake igxalaba zisilekelele,” kusho uJordaan.
IQEMBU leBanyana Banyana okunxenxwa osomabhizinisi ukuthi baleseke ngezimali ukuze likwazi ukuhlafuna kangcono Isithombe: BACKPAGEPIX